Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Photos ka kharribeen Memory Cards
1 Ladnaansho xogta ka noocyada kala duwan card
1.3 Ladnaansho files ka Cards Memory kala duwan
Recovery 1.9 MMC
2 Ladnaansho xogta ka jirta noocyada kaadhka xusuusta kala duwan
Recovery SD Card 2.4-Fi Eye
2.8 ajende Memory Card Recovery
3 Memory Card Recovery hoos senarios kala duwan
3.1 Ladnaansho tirtiray Files From Memory Card
3.2 Memory Card Recovery on Windows / Mac
3.3 Ladnaansho tirtiray Files From SD Card
3.4 Ladnaansho Card formatted SD
3.5 Online Recovery SD Card
3.6 Ladnaansho SD Card on Windows / Mac
4 Fix Error Memory Card
Error Card 4.1 Memory
4.2 SD Card Aan formatted
Error Card 4.3 SD
5 kharribeen / Waxyeello Memory Card
5.1 Waxyeello Micro SD Card
5.2 Ladnaansho Photos From kharribeen Memory Card
5.3 SD Card kharribeen
5.4 kharribeen Card Recovery
6 Photos / kabashada videos
5.1 Ladnaansho tirtiray Pictures From Micro SD Card
5.2 Ladnaansho tirtiray Pictures From SD Card
5.3 Photos Undelete From Memory Card
5.4 Ladnaansho tirtiray Videos ka SD Card
5.1 Sim Card-kabashada Software
5.2 Top 10 Memory Software Recovery Card
5.3 Solutions Card Recovery
5.4 Best Recovery Card Memory Software
5.8 Top 5 SD Software Recovery Card
Sababaha musuqmaasuqa kaadhka xusuusta
Sidee inuu ka soo kabsado photos lumay ka kaarka xasuusta kharribeen
Video tutorial soo kabashada kaadhka xusuusta kharribeen
1 Sababaha musuqmaasuqa kaadhka xusuusta
Haddii aadan xoojiyaa faylasha aad waayadan dambe, kaarka xasuusta kharribeen gelin kara sawiro qaali ah halis bay ku jireen. Si looga hortago kaadhka xusuusta aad ka kharribeen, inaad si fiican u ogaan lahaa sababta uu u kharribmay iyo sida loo fogaado. Akhri Oo waxaad u xusuusan.
»Dami camera marka sawiro lagu wareejiyo si aad u computer ama bilcaksii,
»View sawirada marka ay jiraan weli photos lagu wareejiyay ama ku qoran;
»tuurid kaadhka xusuusta marka camera weli waa;
»qaado sawiro leh batari low ,
»sawir ku xiga marka ta hore waxaa lagu weli ku qoran Fallaadha gan,
»joogto ah u toogtaan iyo tirtirto sawirada marka kaadhka xusuusta buuxsanto,
»Isticmaal kaadhka xusuusta in kaamirooyinka kala duwan oo aan formatting,
»Weli isticmaalaan kaadhka xusuusta muujinaya dhibaatooyinka ka hor.
2 Sidee inuu ka soo kabsado photos lumay ka kaarka xasuusta kharribeen
Haddii aad doonaysid in aad la dayactiro kaadhka xusuusta kharribeen , habka loo isticmaalo inta badan waa in qaab kaarka. Warka ugu xun waxaa formatting masixi doono ku jira oo dhan, halka dhibic ee wanaagsan waa in aad kaarka mar kale u isticmaali karto. Haddii aadan la qorsheeyo si ay u iibsadaan kaar xasuusta cusub, waxaad dooran kartaa in ay dib u helaan tusmada ka yimid kaadhka xusuusta kharribeen. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa barnaamij soo kabashada sawir.
My talo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac .
Isku day version maxkamad free of this kharribeen kabashada software kaadhka xusuusta hadda hoos ku qoran.
Kabsado dhan videos & Cajalado files iyo sawirrada aad camera, fiidiyo, kaadhka xusuusta, sireed flash iyo drive adag si degdeg ah oo ammaan ah.
Deep scan Mode kuu ogolaanaya in aad si aad u ogaato ceshan faylasha lumay dheeraad ah oo gabi ahaanba ka badan kasta oo kale oo software kabashada xogta
Interface User-saaxiibtinimo iyo in la isticmaalo si sahlan muuqaalada
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh hor kabashada kuu oggolaanayaa in aad samayn kabashada xul ah
OS taageerayaan: Windows 10/8/7 / XP / Vista, Mac OS X (Mac OS X 10.6, 10.7 und 10.8, 10.9, 10,10 Yosemite) auf iMac, MacBook, Mac Pro usw.
Fiiro gaar ah : Xusuuso inaad badbaadin natiijada scan haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado faylasha helay ka dib, si looga hortago khasaaro xogta.
Labada of software kabashada sawirka aad u:
»Ladnaansho photos tirtiray ka kaararka xusuusta
»Ladnaansho photos lumay ka kaararka xusuusta
»Ladnaansho photos formatted ka kaararka xusuusta
»Ladnaansho sawiro ka kaararka xusuusta geli karin, aqrin, waxyeelo, ama haleysan
Step1 Connect aad kaadhka xusuusta kharribeen in kombiyuutarka
Hel bilaabay in computer xira aad kaadhka xusuusta hallaysay akhristaha kaarka, ama si toos ah u xirmaan camera aad la cable USB ah. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" si ay u bilaabaan kharribeen xogta soo kabashada kaadhka xusuusta.
Step2 Scan aad kaadhka xusuusta kharribeen
Dooro kaadhka xusuusta iyo riix "Scan" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Step3 Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawiro ka kaadhka xusuusta kharribeen
Marka scan ka baxayo, waxaad ka mid ah ku eegaan kartaa sawiro recoverable ka mid si ay u go'aamiyaan aad rabto in aad soo kabsado. Markaas hubi photos kuwa guji "Ladnaansho" si ay u qabtaan a soo kabashada kaadhka xusuusta kharribeen iyo badbaadin kuwa photos lumay on your computer.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad kaadhka xusuusta kharribeen. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
3 Video tutorial soo kabashada kaadhka xusuusta kharribeen
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Memory Card
Guide Ultimate The in tirto faylasha Isticmaalka degdeg ah amarkiisa iyo Command Line
Siduu u Eye-Fi SD Card Data Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Laptop
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Mobile Phones
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Photos ka kharribeen Memory Cards